Macmacaanka macaanka | March 2020
Waxaan ku koraan bisida guriga: waxaan ka wada hadli karnaa dabeecadaha ugu wanaagsan, waxaanu abuuri karnaa xaalado lagu hayo dhalinyarada.
Editor Ee Doorashada March 29,2020
Ugu Weyn Ee Macmacaanka macaanka
Sababaha saboolka saboolka ah ee clematis iyo ka takoorid
Marar badan, beerashada dhirta ornamental, waxaad rajaynaysaa in ay Bloom iyo fadlan isha. Laakiin mararka qaarkood waxay dhacdaa in geedka uu bilaabo inuu dhaawaco. Xaaladdan, ma arki doontid ubaxyo jilicsan ama caleemo iftiin leh. Mawduucan waxaa loogu talagalay inuu ku caawiyo clematis, kaas oo ku dhuftay "cudur". Waxaan baari doonaa sababta clematis u liidato liidata, waxa la sameeyo haddii uu geedku ku fido dulin, sida loo ilaaliyo baadiyaha miraayada iyo wax ka badan.
Cudurada suurtagalka ah iyo cayayaanka ee violets iyo hababka looga hortago
Marka ugu yaraan hal sharci oo ka muuqda gurigaaga, u diyaari xaqiiqda ah in la weeraro cudurada iyo noocyada kala duwan ee cayayaanka. Hase yeeshee, waxoogaa hore u soconaya, waxaan rabnaa inaan sheegno in habka ugu weyn ee looga hortagi karo tani ay tahay tallaabooyin joogto ah oo ka hortag ah. Sidaa daraadeed, helida warshad cusub, waa in lagu qabtaa dhirta kale iyo hubinta xaalad caafimaad leh.
Waa maxay sababta aan u korin hydrangea, cudurka weyn ee ubaxa
Buundada cagaaran ee hydrangea waxay qurxin kartaa xayawaan kasta ama xayawaanka daaqada, laakiin quruxdaas oo dhan waxay mararka qaarkood ku dhici kartaa cudurro. In beerta iyo cudurrada ubaxa gudaha ka ma kala duwan yihiin, sidaas darteed, hoosta aan ka baran doonaa si faahfaahsan sida loo daaweeyo hydrangea, iyada oo aan loo eegin nooca iyo meel beeritaanka.
Noocyada beeritaanka iyo daryeellada daisies xilliga xagaaga
Diesies waa ubaxyo jilicsan, beeritaanka iyo daryeel dheeraad ah, iyo dhalmo ma qaadan dadaal badan. Si aad ugu kortaan dhul furan, uma baahnid aqoon iyo xirfado gaar ah, iyo kala duwanaansho kala duwan ayaa ka farxin kara xitaa kan ugu caansan. Waa maxay aroosyada jaceylka, shuruudaha ugu wanaagsan ee ubaxyada sii kordhaya Haddii aadan ahayn mid ka mid ah kuwa doonaya in aysan kaliya ku fikirin daisies sawirada, laakiin ku beeraan beertaada, markaa marka hore dhamaantiis meel go'aami.
Cudurada yaanyada iyo hababka wax looga qabto
Waxaa jira cuduro badan oo yaanyo ah. Aqoonta iyaga ayaa faa'iido u leh dhammaan kuwa yaryar si ay u helaan goosashada dhadhan fiican, caafimaad leh, iyo deeqsi leh. Maanta waxaan eegnaa cudurrada ugu caansan ee yaanyada oo aad la kulmi karto. Cudurada bakteeriyada ee yaanyada: Calaamadaha, hababka xakamaynta Sababaha cudurada bakteeriyada ee tamaandhiga ah waa bakteeriyo kala duwan, taasoo horseed u ah dhimashada dhirta, si ay u yareeyaan nacnaanta iyo tayada miraha yaanyo.
Sidee looga takhalusaa waxtarka budada ah ee miro-geedka, ka saar dhibcaha caddaanka ah ee geedka
Sida caadiga ah duurka miro yar yar oo ku kora meel hal meel muddo dheer, xoqin yar-yar oo dhakhso ah ama waqti dambe ayaa saameeya. Ma aha beerta kasta oo go'aan ka gaar ah in laga takhaluso sida baadiyaha, gaar ahaan haddii ay tahay noocyo dhif iyo dhadhan fiican leh. Sidaa darteed, su'aasha dhabta ah waa sida looga takhaluso wax xagta oo budada ah. Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo lagu garaaco fangaska.
Astaamaha: cudurada iyo cayayaanka, la dagaallama iyaga
Bannaanka u badan dhirta ay ku qoran yihiin dhirta quruxda badan ee sannadlaha ah ama dhirta dhirta qoyan - qiiq. Waxaa jira in ka badan 500 nooc. Astir waxaa lagu beeray sariiraha ubaxa, loo isticmaalo xuduudaha, rabatok, inay qurxiyaan balakoonnada ama terraces, si ay u sameeyaan bouquets qurux badan iyo habaynta ubax. Laakiin, nasiib daro, dhammaan quruxdaas waxaa lagu dhufan karaa cudurrada asters, taas oo ka badan hal ninkii beerta.
Sidee loo daweeyaa tilifoonka guryaha?
Phlox - quruxda dhabta ah ee beerta. Caraf udgoon leh, ubaxyo dhalaalaya oo leh midabo kala duwan ayaa ku farxi doona milkiilayaashooda xagaaga oo dhan. Ubaxyadaas uma baahna daryeel gaar ah ilaa ay ka xanuunsadaan. Nasiib darro, phloxes way jiran yihiin, sida dadka. Had iyo jeer ma ahan kuwo la daweyn karo (gaar ahaan haddii calaamadaha ugu horeeya ee cudurka aan la ogaanin waqtigooda).
Talooyinka ugu fiican ee daryeelka iyo beeritaanka viburnum Buldenezh
Kalina Buldenezh (oo leh Faransiiska. "Boulede Neige" - duni baraf ah) - geedo qurxoon, noocyo of viburnum leh ballaadhan, baraf dhaadheer sida. Warshad waa mid aad u caan ah beerta, inkastoo xaqiiqda ah in aysan midho dhalin. Astaamaha iyo dabeecadaha viburnum Buldenezh Tan waxaa lagu magacaabaa viburnum sterile, sababtoo ah ubaxa waa madhalays.
Sida loola dhaqmo cudurada pear
Hadafka beerta oo idil waa goosashada qani ku ah miraha. Si kastaba ha ahaatee, si ay u koraan waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u daryeelaan geedo midho leh, si ay ugu lug yeeshaan ka hortagga iyo daaweynta cudurrada. Khataraha sugaya geedaha waa kuwo badan. Pear wuxuu ku dhufan karaa dhowr cudur. Ka dib markaad akhriso maqaalkan, waxaad ka baran doontaa cudurrada ugu badan ee pear, oo ku saabsan hababka ka hortagga iyo daaweynta.
Sida loola tacaalo cudurada iyo cayayaanka
Viola (pansies) - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee sariiraha ubax iyo rabatkah, gacaliyay by bannaanka u badan. Waxaa iska leh qoyska jabhada. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa bakhaarada qurxinta, balakoonka, arbors. Ma taqaanaa? Giriiga qadiimka ah iyo Roomaanku waxay qurxiyeen qolka leh jebinta inta lagu jiro fasaxyada iyo xilliyada xafladaha cashada.
Sida loo ciribtiro geedaha tufaaxa cudurada, hababka waxtarka leh
Horumarinta geedo tufaax ah oo dalka ka mid ah way ka sii adag tahay inta laga yaabo inay u muuqato in jaleecada hore. Si si joogto ah u qaato goosashada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daryeelo geedo midho leh, si loo ogaado cudurada ugu waaweyn ee geedaha tufaaxa iyo daaweyntooda. Waxay ku saabsan tahay cudurada dhirta tufaaxa, caleemaha iyo hababka daaweynta ayaa looga doodi doonaa qalabkaan. Ma taqaanaa?
Sidee loola tacaali karaa cudurrada faafa
Haddii xayawaankaaga suugada ee jilciyaashu ay ka adkaadeen cuduro kala duwan, ha quusan, oo u goynayaan beerashada. Cudurada intooda badani way adag yihiin in laga gudbo. Waa inaad is-xakameysid adiga oo dulqaad leh, talooyin ka soo jardiinooyin khibrad leh iyo alaabooyinka xakamaynta cudurrada oo si sahlan loo iibsan karo dukaanka khaaska ah ee kuugu dhow.
Cayayaanka waaweyn iyo cudurada bocorka
Pumpkin waxaan soo wacnaa khudradda leh midab khafiif ah. Warshadu waxay asal ahaan ka timid Koonfurta Ameerika, inkasta oo dalkeenna, ayadoo ku xiran xaaladaha beerashada iyo noocyada kala duwan, miraha bocorku waxay gaari karaan 1 m dhexroor, oo leh tiro ka badan 200 kiilogaraam. Qashinka iyo xitaa bocorka bocorka waa la wada cunaa sida cuntada, laakiin maqaarka khudradda ayaa si xun loo tuuraa, maadaama ay tahay mid aad u cufan, qallafsan oo aan dhadhanayn.
Suuxi hababka xakamaynta cudurada
Dill waa geedka sannadlaha ah ilaa 125 cm sare, asliga ah waa god, caleemaha khafiifka ah waa badan yihiin-leaved, ubax ah midabka huruud ah dalladda adag, ubaxu, foomka miraha brown oval - abuur. Dill waa warshad cadaalad ah oo aan qabyo ahayn, laakiin badanaa waxaa saameeya cuduro kala duwan oo ka hortagaya ninkii beerta ka shaqaynayay si uu u helo dalag fiican oo caleenta udgoon.
Sida loola tacaalo cayayaanka iyo cudurada malayga
Waxaa laga yaabaa, ma jiri doonaan khudrado noocan oo kale ah kaas oo luuqada Ruushka ku jiri lahaa hadallo badan, calaamado xasaasi ah iyo erayada dhaarta, sida malayga. First of dhan, waxay xoojiyaan dhadhanka qadhaadh iyo qadhaadh geedka this. Dhanka kale, malayga (lat Armorácia) waa xayawaan jilicsan oo ah mid aad u faa'iido leh oo qofna leh bogsiin badan.
Sida loola tacaalo cudurrada dabocase
Dabocase waxaa loola jeedaa dalagyada hore ee u bislaaday kuwaas oo si dhif ah u saameeya cudurka. Si kastaba ha ahaatee, wali way dhacdaa. Beerta habboon ee beerta iyo beerta ayaa ka fogaanaysa intooda badan. In this article waxaan ka hadli doonaa calaamadaha iyo hababka ula dagaallama cudurrada dabocase. Khudradani waxay ka gudbi kartaa fayrasyada iyo fungus-ka.
Cudurada caamka ah iyo cayayaanka iyo xakamaynta firfircoon
Duurjoogta, waxaa jira qiyaastii 600 nooc oo ah hadhuudh. Waxay ku yimaadaan qaab ah geedo iyo geedo, dheer iyo dheer, oo leh noocyo kala duwan oo caleen ah iyo midab jilicsan. Dhaqanka, waxaa jira noocyo badan iyo noocyo badan. Oo dhammaantoodna waxaa halis gelin kara tiro badan oo cuduro iyo cayayaanka. Qodobka ugu khatarsan iyaga ayaad ka baran doontaa maqaalkan.
Waxa la sameeyo haddii dhibcaha dhegdheg leh ay ka muuqdaan orchid
Wixii beerta ubadka, beddelka muuqaalka ubaxyada koray waa mid daran oo ka fekeraya caafimaadkooda. Si la mid ah orchid, dhibco dhaadheer ah ayaa u muuqda caleemaha - waxaan isla markaaba raadineynaa sababta. Waa in la ogaadaa in dhacdadani aysan macquul ahayn inay muujiso baahida loo qabo in lagu daaweeyo dhirta, laakiin suurtogalnimada suurtogalnimada lama saari karo.
Sida loola tacaalo jeexjeexyada budada ah ee shubanka
Mealy dheenku waa mid ka mid ah cudurrada ugu caansan iyo kuwa aan fiicnayn oo tiro badan oo dhir ah ay la kulmaan. Waa lagama maarmaan in loola dagaallamo, sababtoo ah natiijada cudurkan la dayacay waa dhimashada geedka. Gaar ahaan habooneyn marka cudurku burburiyo quruxda dhirta ornamental. Maqaalkani waxa aanu rabnaa inaanu kula wadaagno talooyin ku saabsan sida looga hortagi karo tolida budada ah ee qaboojinta iyo waxa la sameeyo haddii ay dhacdo ubaxyada.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Macmacaanka macaanka 2020